Dacwadda Imaaraadka iyo Qatar oo si rasmi ah uga furantay maxkamada ICJ - Caasimada Online
Home Warar Dacwadda Imaaraadka iyo Qatar oo si rasmi ah uga furantay maxkamada ICJ
Dacwadda Imaaraadka iyo Qatar oo si rasmi ah uga furantay maxkamada ICJ
Muqdisho (Caasimada Online) – Sida ay baahiyeen Wargeysyada kasoo baxa dalka Sacuudiga, Dowlada Qadar ayaa dhawaan dacwad heer caalami ah ka gudbisay dowlada Imaaraadka carabta taa oo iminka ka furmatay Maxkamada ICJ ee Magaalada Hague.
Maxkamada ICJ ee Magaalada Hague oo dacwadaani la hordhigay ayaa iminka furay, waxaana Maxkamada ku sugan mas’uuliyiin kala mataleysa labada dal.
Dacwada ay Qadar u gudbisay Maxkamada ICJ ayaa ku saleysneed in Dowlada Imaaraadka carabta ay ku xadgudubtay dhinaca xuquuqda aadanaha iyo takoor gaar ah oo ay ku sameysay muwaaddiniinta Qadar ee ku sugan caasimada iyo Gobolada dalka Imaaraadka.
Dowlada Qadar ayaa Maxkamada ICJ horgeysay in Imaaraadka carabta ay gaf ku talo gal ah u geysatay Muwaadiniintooda ku sugan dalkaasi kuwaa oo cadadka qiyaasta kor u dhaafaya 13,000 oo shacab Qadar u dhashay ah.
Dacwada Qadar ayaa ah in dowlada Imaaraadka carabta ay dalkeeda ka erisay 13,000 muwaadin, halka tirro kale ay boob Hantiyadeed kula dhaqaaqen inta lagu guda jiray bilowga xiisada labada dal.
Dacwada Qadar ayaa waxaa sidoo kale kamid ah in dowlada Imaaraadka ay hawadeeda ka mamnuucday diyaaradda Qatar Airways iyo qodobo kale.
Wakiillada Dalka Qatar ayaa shalay oo Arbaca ahayd waxaa ay Maxkamadda ka hor jeediyeen dacwadda ay u qabaan Imaaraadka.
Sidoo kale, maanta oo khamiis aheyd ayaa waxaa Maxkamada hortagaayay wakiillada Imaaraadka oo iyaguna fal celintooda ka jeedinaayay Maxkamadda horteeda.
Si kastaba ha ahaatee, kiiska ugu badan ayaa dusha laga saaray Dowlada Imaaraadka oo iyadu si ay ku jirto cadaawad kula dhaqantay Qadar.